Madaniga 3D - Bogga 3 - Geofumadas
Txus ayaa dhawaan ku shaacisay barteeda, ugu yaraan kuwa ay Ser & Tec wax ka dhigi doonaan 14ka Maajo ee Malaga iyo 8da May ee Valencia. Qeybiyeyaasha ugu weyn ee AutoDesk ee Isbaanishka waxay bixin doonaan aqoon-isweydaarsiyo diiradda lagu saarayo maareynta dhulka iyo dhulka ee hoos timaadda deegaanka 3D; kuwan waa aqoon-isweydaarsiga: Horumarinta ...
Qoraalkani wuxuu jawaab u yahay Diego, oo ka yimid Paraguay, oo na weydiinaya su'aasha soo socota: farxad inaan ku salaamo ... in yar ka hor raadinta aan si kama 'ah ugu soo degay websaydhkaaga waxaanan u arkaa mid aad u xiiso badan, labadaba iyo nuxurka Waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, haddii aad ogtahay wax ...
Mashruucan waxaan ku sameyn doonnaa geeddi-socodka soo socda: Abuur feyl cusub, ka soo dhoofinta dhibcaha faylka guud ee saldhigga ee 'Excel', abuur cinwaanno badan, u qoondee jaangooyo, u dir Google Earth oo sawir ka soo qaad Google Earth iyo AutoCAD Waxaan horay u aragnay qaar ka mid ah nidaamyadan cagta, kiiskan waxaan arki doonaa sida loogu sameeyo AutoCAD ...
Mashruucan waxaan ku tusayaa sida aad u dhisi karto miis dulucda iyo masaafada isweydaarsiga iyadoo la adeegsanayo AutoCAD Sofdesk 8, oo hadda ah Civil 3D. Waxaan rajeynayaa tan inaan ku magdhabo kooxdii ugu dambeysay ee ardayda ee aan ku qaatay koorsada loo yaqaan TopoCAD, oo aanan waligey dhammeyn karin maxaa yeelay waxaan galay safar ... safarkaas oo ah ...
Waa imisa qiimo-dhimista AutoDesk?
Qoraalkani wuxuu u heellan yahay su'aalaha qaarkood ee aan had iyo jeer ku soo arko tirakoobka Google Analytics: Immisa ayey mudan tahay AutoCAD? Halkee laga iibsadaa AutoCAD? ... Halkan waxaa ku yaal liis kooban oo ah badeecadaha iyo qiimaha (oo aan ku jirin canshuurta iibka) oo ku tiirsan waddan kasta Qiimaha kor u kaca ayaa ka hooseeya Kuwani waa qiimaha marka aad wax ka iibsanayso khadka tooska ah ...
Map-ka AutoCAD AutoDesk 3D Dwg
Kahor intaanan ka hadlin sida sawir looga soo dejinayo Google Earth loona keenayo AutoCAD, haddaba aan aragno sida loo soo dhoofiyo dusha sare isla markaana loo sameeyo sawirkan midabbo leh oo lagu ugaarsan karo dusha 3D. Xeeladdu waa isku mid wixii aan ku aragnay Microstation, abuurista maaddooyin iyo xitaa xallinta dhibaatada sawirku ku jiro ...
Kahor intaanan ka hadlin sababta ka jirta deegaankeena, inta badan sawir gacmeedyadii hore waxay ku jiraan NAD 27, halka isbeddelka caalamiga ah uu yahay isticmaalka NAD83, ama sida dad badani ugu yeeraan WGS84; inkasta oo labaduba dhab ahaan isku aragti yihiin, haddana farqiga u dhexeeya waa Datum oo keliya (waxay ku kala duwan yihiin uun shabakadda UTM). Qaar badan baa gala ...
Kahor inta aynaan eegin dhoofinta xogta Excel iyadoo la adeegsanayo Softdesk, haddaba aan aragno sida loo abuuro khadadka qaabdhismeedka, nidaamka ka socda Civil3D waa la fududeeyay laakiin badanaa waxay leedahay caqli isku mid ah oo aan ku sharxi doono buuggaygii hore ee CAD Topography. 1. Sawiridda dhibcaha sare Sahanka aan ku sameeyay ...